April 9, 2021 - समृद्ध नेपाल
नेपालकी छोरी हुँ म’ भन्दै सबैलाई नचाउने यी हुन् इण्डियन आइडलका प्रतियोगी पवनदीपकी बहिनी ज्योति !
पवनदीप राजन बिश्वभरीका हिन्दी नेपाली गीत संगीत मन पराउने दर्शक श्रोताबिच परिचित नाम हो । तर उनकी बहिनी ज्योतिलाई धेरैले नचिन्न सक्छन् । ज्योतिका अगाडि प्रतिभालाई उमेरले छेकेन । इण्डियन आइडलका प्रतियोगी पवनदीप रियलिटी शो द भ्वाइस अफ इंडियाको पहिलो सत्रका विजेता पनि हुन् ।उनकी बहिनी ज्योति राजन पनि पवनदीपकै बाटोमा छिन् । हुन त
चर्चित टिकटकर सुधिर श्रेष्ठलाई आफ्नै दाई बताउने यी युवतीले ठगिन लाखौं रुपैया सुधीरको नाम बदनाम गर्ने युवतीको यस्तो रहेछ वास्तविकता, खुल्यो रहस्य भिडियो हेर्नुस्राधा कुमारी चौधरी जसले टिकटकमा निकै चर्चित रहेका सुधिर श्रेष्ठलाई आफ्नै दाई हुन् भन्थिन् । उनको सामाजिक सञ्जालमा सुधिरसंग थुप्रै भिडियो बनाएकी छन् । सुधिर पनि निकै चर्चित युट्युवर हुन् मोरग पथरी
आमाबुवाले भविष्यमा आफुलाई पनि सहयोग हेरचाह गर्ला भन्ने आशाले आफ्ना सन्तानको पालन पोषण गर्छन । उनीहरुको भविष्यका लागि धेरै कुरा कम्प्रोमाइज गर्छन । उनीहरुका लागि अभिभावकले धेरै दुख सहन्छन् । तर उनी सन्तानले वृद्ध अवस्थामा आमाबुवाको संरक्षण गर्नु पर्ने बेलामा घर निकाला गर्दा ति बुवा आमालाई कति पि डा हुन्छ होला । जेठो छोरा डा
भारतले अव’रुद्ध गरेको स्थानमा पहाड फोडेर सडक बनाउदै नेपाली सेना !
नेपाली सेनाले घाँटीबगर इलाकामा कडाचट्टान रहेको भीरमा ४६०मिटर गोरेटो बाटो निर्माण गरेको छ।यही भदौ मसान्तभित्रै ५५०मिटर उक्त गोरेटो बाटोको ट्ययाक खोलिसक्ने सेनाको तयारी छ ।भारतले सडक निर्माणका क्रममा अवरुद्ध रहेको घाँटीबगर क्षेत्रमा बाटो अवरुद्धहुँदा व्यासको छांगरु र तिंकरका बासिन्दालाई आवतजावत गर्न समस्या थियो । गत जेठ ९गतेदेखि नेपाली सेना परिचालन भएर यो क्षेत्रमा गोरेटो बाटो
बड्यो वृद्धाभत्ता हेर्नुहोस पूरा समाचार सहित !
केपी शर्मा ओलीले आगामी साउन १ गतेबाट वृ”द्धभत्ता बढउने घोषणा गरेका छन् । मंगलबार रिपोर्टस क्लबको वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा बोल्दै उनले साउन १ गतेदेखि वृद्धभत्तालगायतका सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढ्ने घोषणा गरेका हुन् । यद्यपी उनले कति बढ्ने भन्ने विषयमा भने खुलासा गरेनन् । ओलीले भत्ता बढ्ने कुरा सुन्दा कसैलाई निन्द्रा नलाग्ने पनि बताए
पदमुक्त भएका ४ मन्त्रीको पुनर्नियुक्ति, आजै ५ बजे शपथ !
सांसद पद गुमाएका चार नेताले शुक्रबार फेरि मन्त्री पदको शपथ लिने भएका छन् माओवादी केन्द्र छाडेर हालै एमाले प्रवेश गरेका टोपबहादुर रायमाझी लेखराज भट्ट प्रभु साह गौरीशंकर चौधरीलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री पदमा पुनर्नियुक्तिको सिफारिस गरेका हुन् उनीहरुको शपथ कार्यक्रम शुक्रबार साँझ ५ बजे तोकिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिए । हालै
नेपाली बजारमा लोकप्रिय मोटरसाइकल कम्पनी बेनेलीले नयाँ बर्षमा मोटरसाइकल पारखीको लागि नयाँ मोटरसाइकल सार्वजनिक गरेको छ । इन्ट्री लेवल कार भन्दा पावरफुल इन्जिन भएको नयाँ मोटरसाइकल ७५२ एसको नेपालमा विक्री गरेको हो नेपालका लागि बेनेली मोटरसाइकलको आधिकरिक वितरक केटीएम इन्टरनेशनल ट्रेडिङले बेनेली ७५२एसलाई नेपाली बजारमा उतारेको हो इटालियन मोटरसाइकल निर्माता कम्पनी बेनेलीको मिडसाइज नेकेड मोटरसाइकल
नायीका स्वस्तिमा भन्छिन् बिहेको भोलिपल्टै श्रीमानसँग एउटै कोठामा जान दिइएन !
अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काले महिनावारी भएको बेलामा आफुले भोगेको कुरालाई एउटा अ’न्तवार्ताका क्रममा ब्याख्या गरेकी छन् । उनले विवाह पछि म’हिनावारी हुँदा आफ्नो श्रीमानको कोठामा जान नदिइएको कुरालाई पनि सा’र्वजनिक गरेकी छन् । विवाह भएको भोलीपल्दै म’हिनावारी भएको बताएकी उनले त्यतीबेला आफुलाई श्रीमानको कोठामा जान नदिइएको बताएकी हुन् । पहिलो म’हिनावारी बार्न सात दिन आफ्नो मामाघर
पानीपुरी चटपटे बेचेरे ५ बर्षमै काठमाण्डौमा घर बनाएकी सुन्तली दिदीको अनौठो संघर्ष !
सबैको रहर हुन्छ कुनैपनि ब्यबसाय गर्दा राम्रो कमाई होस् र काठमाण्डौमा या मनपरेको ठाँउमा सानो एउटा झुपडी जस्तै घर होस्। हो त्यस्तै सपना थियो सुन्तली दिदीको आज निरन्तरको मेहनतले पुरा भएको छ अनामनगर अबस्थित एक सानो घरमा सुन्तली दिदीको पानीपुरी तथा चटपटे पसल छ।दिदि बिहानै देखि ब्यापार सुरु गर्छिन। बिहान किराना सामग्री बिक्रि गर्छिन भने
लेडिज ब्याग लुटेर बाइकमा हुइकिने ३० वर्षीय युवा पक्राउ !
सुनसरीको ईटहरीमा सुनको सिक्री र लेडिज ब्याग लुटेर आतंक मच्चाउने बिजु मोतेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । झापाको दमक घर भएका ३० वर्षीय बिजुलाई ईटरही उप–महानगरपालिका–६ बाट पक्राउ गरिएको ईटहरीका डिएसपी अर्जुन केसीले बताए मोरङको केराबारी गाउँपालिका–९ मा डेरा गरेर बस्ने बिजुले ईटहरीमा लुट आतंक मच्चाउँदै आएका थिए ।पसल बन्द गरेर घर फर्किने महिलालाई टार्गेट